Eyona mpompo yoMoya oLungileyo kwi-Aquarium | Ngeentlanzi
Njengoko sele uyazi, i-aquarium ifuna izixhobo ezahlukeneyo ukuze zisebenze ngokufanelekileyo kwaye zigcine iintlanzi zethu zisempilweni. Asipheleli nje ekujongeni ukutya kunye neempawu zentlanzi, kodwa kufuneka sibeke imeko kwindawo entsha. Ukulungiswa nokucocwa kwamanzi impompo yomoya iyimfuneko. Nangona kunjalo, kukho amawaka eemodeli ezineempawu ezahlukeneyo. Yeyiphi eyona ilungele i-aquarium yakho?
Kweli nqaku siza kubonisa ukuba ziyintoni na ezona mpompo zomoya zilungileyo ze-aquariums. Ukongeza, siza kukuchazela yona kwaye siza kukunika ukuba zeziphi izibonelelo zokusetyenziswa kwayo.
1 Ezona mpompo zomoya zilungileyo kwi-aquariums
1.1 IiBPS 6029
1.2 Itekhnoloji ye-Aquaflow AAP-301S
1.3 Impompo yomoya yeSannysis
2 Yintoni ekufuneka ibe nayo impompo yomoya
Ngoku, siza kwenza uthelekiso phakathi kwezinye zeemodeli ezilungileyo kwaye siya kukunika izizathu zokuba kutheni kufuneka ukhethe nganye nganye.
I-BPS (R) Impompo yomoya, ...
Le modeli inobungcali kwaye inendawo yokuphuma yethumbu enye kuphela. Inesiphatho somoya esime ngamatye, ke ngoko sinokuqhotyoshelwa kolunye uhlobiso onalo ngaphakathi kwi-aquarium. Iya kubonelela ngamanzi kwi-aquarium yakho okanye itanki yentlanzi ngomgangatho ongaphezulu kunye neoksijini ekufuneka iphefumlelwe yintlanzi.
Ngokubhekisele kwiimpawu zayo, inobunzima kuphela iigram ezingama-250, ke akukho nto unokuyibona. Kulula ukuphatha nokugcina. Igcina amandla amaninzi, kuba amandla ayo yi-3W. Ifuna unikezelo lwamandla ayi-220 V kwaye iyakwazi ukupompa i-3,5 l / min.
Ukuba uthatha isigqibo sokuyithenga, ungayenza ngokunqakraza apha. Akubizi mali ininzi. Ukuba uyithengile, kuya kufuneka uyazi ukuba kufuneka ifakwe umbala ngaphezulu kwenqanaba lamanzi kwi-aquarium. Ngokuchasene noko, ukuba uyibeka apha ngezantsi, iyakwenza uhlobo lokubuyela umva emanzini okuya kubangela ukuba impompo iphele iphuka.
Itekhnoloji ye-Aquaflow AAP-301S
Itekhnoloji ye-Aquaflow® ...
Le modeli yesibini ineendlela ezimbini ezahlukeneyo. Inako ukupompa nje i-1,5 l / min. Ifanelekile kwiitanki ezincinci zentlanzi ezilinganisa i-17,4 × 10,2 × 8 cm. Le bhombu inobunzima obungama-400 gr. Imodeli enobungakanani be-3 l / min ine-18 x 10,4 x 8 cm kunye nobunzima obulinganiselweyo be-581 gr.
Ezi modeli zimbini zisebenza kunye Amandla e-3W kwaye afaka ilitye lomoya, ithumbu kunye nevalve yokubuyisa. Nokuba enye inamandla amakhulu kunenye, iya kubanakho ukubonelela iintlanzi ngeoksijini eziyifunayo ukuze zibe sempilweni kwaye zikhule kakuhle.
Kwinqanaba lamaxabiso kuyafikeleleka. Ungayithenga apha.
Impompo yomoya yeSannysis
Impompo yamanzi ...
Kule modeli sifumana iintlobo ezininzi ezisebenza ngamandla ahlukeneyo. Enye isebenza kwi-1,5 W enye kwi-2W. Ukunikezelwa kwamandla kuyafana kwi-220V ukuya kwi-240V kunye nomthamo yi-2l / min. Yenzelwe iitanki zentlanzi eziphakathi, nangona zikhusela kakuhle nokuba sinentlanzi ephezulu.
Le yinto ebalulekileyo ekufuneka uyigcine engqondweni. Ayipheleli nje kubungakanani betanki kunye nobungakanani bamanzi owadingayo, kodwa nenani leentlanzi ezihlala kulo kubalulekile. Inani leentlanzi esinazo kwitanki enye, kokukhona kufuneka songeze ioksijini ngakumbi kunye nentshukumo yekharbon diokside egxothiweyo.
Ezi modeli zitshiphu kunezangaphambili kwaye zithatha indawo encinci. Ubukhulu bayo buyi-11,5 cm x 7,8 cm x 7,5 cm. Abanye abasebenzisi esele bayithengile bathi ziimodeli ezizolileyo kwaye zixhoma ngokulula eludongeni okanye phantsi. Ukuba ufuna ukuthenga le modeli, Kuya kufuneka ujonge kuqala ubungakanani kunye nenani leentlanzi kwi-aquarium yakho. Zimpompo ezenzelwe i-aquariums ezincinci, ke akufuneki uyibeke kwi-aquarium enomthamo wamanzi omninzi.
Khumbula ukuba impompo ayinakungena emanzini. Ukuba uyilahla emanzini, yikhuphe ngaphambi kokuba uyikhuphe okanye ungothuka. Ukuthintela nakuphi na ukungasebenzi kakuhle okubangela ukuba impompo yakho yomoya idilize, jonga i-voltage kuqala ngaphambi kokuyifaka nokusebenza kwayo. Ungathenga ngexabiso elifanelekileyo ngokunqakraza apha.
Yintoni ekufuneka ibe nayo impompo yomoya
Xa sithetha ngempompo yomoya ye-aquarium, kufuneka sinikele ingqalelo, ikakhulu, ukuze ifeze umsebenzi wayo. Nangona uyilo lukwabalulekile, impompo entle kakhulu ayinamsebenzi ukuba ayizalisekisi umsebenzi wayo wokugcina umlinganiselo weoksijini emanzini kunye nokuthintela amanzi ekumeni okanye ekuthobekeni ngokulula.
Kuyacetyiswa ukuba uphonononge ubuchwephesha bokubona ukuba ilungile na i-aquarium yethu. Into yokuqala kukubona amandla ngokunxulumene nobungakanani kunye nenani lamanzi esiya kuba nawo kwi-aquarium. Ukuba mkhulu kwe-aquarium, kokukhona kuya kufuna amandla ngakumbi impompo.
Uyilo kunye neenkcukacha zikwabalulekile, njengoko ziya kongeza isibheno esibonakalayo esikhulu. Itanki leentlanzi elihonjiswe kakuhle linokugqibelela ukuyilungisa kumagumbi okuhlala, iiofisi nakwizifundo. Iimpompo zomoya zizixhobo eziqhagamshelwe ngaphandle kwe-aquarium kwaye owona msebenzi wazo kukuhambisa amanzi kwitanki kunye nokubonelela ngeoksijini. Le oxygen yaziswa ngamaqamza.
Xa amaqamza aqhekeke ngaphezulu, khupha i-carbon dioxide engaphezulu kwaye ke banethuba lokuthatha indawo yeoksijini xa idibana nemolekyuli yamanzi. Ke ngoko, ubukhulu bomphezulu wamanzi, kokukhona kuya kufuneka ioksijini ifunxe.
Ukuhamba kwamanzi lolunye uncedo lweempompo zomoya. Ukuba amanzi amile, isikhunta kunye nokubola kunganda. Njengoko umoya ukhutshwa, ityhala amanzi anzulu kwaye iwathumele ngaphezulu. Ikwavumela amanzi angaphezulu ukuba anyakaze aye kungena ngokutsha kwaye anyuse umgangatho wamanzi kwitanki leentlanzi.
Ndiyathemba ukuba ngezi ngcebiso ungonwabela ezona mpompo zomoya zilungileyo zolwandle kunye nezibonelelo zazo. Ungalibali ukulandela imiyalelo enikezwe ukusetyenziswa kakuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Ezona mpompo zomoya zilungileyo kwi-aquariums